အော်.. တရုတ်တွေ.. တရုတ်တွေ အစားသောင်းကျန်းတဲ့ နေရာမှာတော့ မှီတဲ့ နိုင်ငံမရှိလောက်ပါဘူး ။ အခု လည်း ဖားအသားဖျော်ရည်တဲ့ ။ သာမန်လူတွေဆို သောက်ဖို့နေနေသာ မအန်ချင်အောင်ပဲ အတော် သတိထား ရပါလိမ့်မယ် ။ တကယ်တော့ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ လူသားတွေအတွက် စားသောက်စရာတွေဟာ မကုန်မ ခန်းနိုင်လောက်အောင်ပဲ ပေါများလှပါတယ် ။ ဘာကြောင့်များ ဒီလို အစမ်းထွင်ပြီး စားကြတာလည်းဆိုတာ မစဉ်း စားတတ်အောင်ပါပဲ ။ တိရိစ္ဆာန် ညှင်းပန်းကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တွေကလည်း ဘာကြောင့်များ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေကြပါလိမ့် .... ။
ဖားလေးတွေခမျာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ သူတို့ရဲ့ သေမယ့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေတာနဲ့ မတူပေဘူးလား ။ ကိုယ် သာဆိုခဲ့ရင်ရော.....?????
ဒီဖားလေးကတော့ ကံဆိုးရှာသွားပါပြီ ။ မကြာခင်အရည်ဘ၀ကို ကူးပြောင်းရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ်သာ ဆိုခဲ့ရင်ရော......?????
ဖျော်ရည်လုပ်ဖို့ ဒီလို ဘလန်ဒါခွက်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ် ။ ဖားလေးကို အရည်ခွံပါ ချွတ်ပြီးမှထည့်တာနော် ..။ ကိုယ့်ကို အရည်ခွံချွတ်ခဲ့ရင်ရော......?????
အဲဒီအရည်ကို မြိန်ရှက်စွာ သောက်သုံးနေတဲ့ လူတစ်ဦး ။ သူသာ ဖားနေရာမှာ ဆိုခဲ့ရင်ရော....????
သတ္တ၀ါတွေ.. ကံမကောင်းခံလို့ ဘုံဘ၀နိမ့်နေပေမယ့် အသက်က ..အသက်ပါပဲ ။ ဒီလို မျိုး နည်းတွေနဲ့ စား သောက် ဖွယ်ရာတွေကို ခံတွင်းတွေ့တွေ့ စားသောက်နေကြတာဟာ..တချိန်မှာ ကိုယ်ပြန်လည် မခံရနိုင် ဘူးလား ဆိုတာကတော့.....။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:17 AM
nannlaypyaenu June 8, 2010 at 10:25 AM
သုံးကျလွိ နဲ့တင် တော်တော်လန့်နေတာ။
nannlaypyaenu June 8, 2010 at 10:26 AM
ပိုစ်ဖတ်ပြီးတော့ စာနေတဲ့ မနက်စာတောင်မစားချင်တော့ဘူး
မိုးခါး June 8, 2010 at 2:39 PM
စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလိုက်တာ .. အန်တောင် အန်ချင်တယ် ..း((
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ June 8, 2010 at 3:07 PM
အော့ ဝေါ့..... :'(
စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းလိုက်တာ.... ဖားလေးတွေ သနားစရာ.....
သဒ္ဓါလှိုင်း June 8, 2010 at 3:25 PM
ပန်းခင်းလေး June 8, 2010 at 3:29 PM
ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံ ပဲ့ တင်သံ ကိုယ့် ထံပြန်လာ၏တဲ့ 
သူလည်း ဒီတိုင်းတော့ မနေပါဘူး . . .
မြင်ရတွေ့ ရတာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူး :(
Zay Tar Yar June 8, 2010 at 10:10 PM
blackroze June 10, 2010 at 1:23 AM
မလင်းပြာ June 10, 2010 at 10:57 AM
Shwe Layy February 24, 2012 at 6:26 PM
Shwe Layy February 24, 2012 at 6:27 PM
cherry pan February 25, 2012 at 9:07 AM
အရှင်တွေကိုထည့် မွှေတာတော့ ....ရက်စက်ရာကျပါတယ်....ပြီးတော့ ..ရွံစရာကြီး....
thikhine May 24, 2012 at 5:50 PM
Oh my God ! soe lite tar naw..